Ny sain'i Groenlanda
Sarintany maneho ny toerana misy an'i Groenlanda (loko maitso)
I Groenlanda na Grinlandy na Groenlandy (izay azo adika hoe "Tanimaitso" amin'ny fiteny malagasy araka ny anarany amin'ny fiteny danoa), na Kalallit Nunaat amin'ny fiteny kalalisota, dia nosy iray ao ao amin'ny Ranomasimbe Arktika. Faritany mizaka-tenan'i Danemarka io faritra io; ka noho izany na dia any Amerika Avaratra aza no misy an'ilay nosy, dia an'i Eoropa izy.
Fito arivo sy dimy alina no isan'ny mponina miaina any Groenlanda. Ny fiteny kalalisota no teny ofisialy ary i Nuuk no renivohitra.
Ny tendrombohitra Nunatak, eo amin'ny amorontsiraka atsinanan'i Groenlanda
Nosy faharoa lehibe indrindra i Groenlanda aorian'i Aostralia. Eo anelanelan'ny Ranomasimbe Arktika sy ny Ranomasimbe Atlantika avaratra no misy azy, izany hoe any andrefan'ny toerana misy an'i Islandy ary eo avaratra atsinanan'i Kanada.
Ranomandry manana hatevina telo kilometatra ny 95 isan-jaton'i Groenlanda. Manindry ny vato eo ambaniny ilay ranomandry ka araka izany dia mety hisy farihin-drano masira eo anivon'i Groenlanda raha afaka avokoa ny ranomandriny.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Groenlanda&oldid=978394"
Voaova farany tamin'ny 10 Desambra 2019 amin'ny 01:00 ity pejy ity.